बिग मर्जरपछि ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक’ कस्तो देखिएला ? - Laltin Media
Home»आर्थिक समाचार»बिग मर्जरपछि ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक’ कस्तो देखिएला ?
बिग मर्जरपछि ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक’ कस्तो देखिएला ?
By लाल्टिन डट कम June 12, 2022 Updated: June 12, 2022 No Comments4 Mins Read
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सबल तथा सक्षम बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैँकले अंगिकार गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर/एक्वीजिसन नीतिको अनुसरण गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडबीच एकआपसमा गाभ्न गाभिनको लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्र (MOU) मा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे तथा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको तर्फबाट अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक १००ः९० को अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० कित्ता बराबर मेगा बैंकले ९० कित्ता सेयर पाउने छ ।
मर्जरपछि बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक राख्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । साथै मर्जरपश्चात् बैंकको अध्यक्षमा पृथ्वी महादुर पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे बन्ने सम्झौता भएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्ज भएपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पूँजी ३२ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । अहिले एनआईबिएलको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र मेगा बैंकको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब १२ करोड ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
एनआईबिएल बैंकको जगेडा कोष १४ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मेगा बैंकको जगेडा कोष ५ अर्ब ९१ करोड ६५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मर्जरपश्चात २२ अर्ब ३५ करोड २२ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
एनआईबिएल बैंकको कर्जा १ खर्ब ७३ अर्ब ४६ करोड १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मेगा बैंकको १ खर्ब ५० अर्ब ४५ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको कर्जा ३ खर्ब २३ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
मर्जरपश्चात् बैंकको निक्षेप ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हाल एनआईबिएल बैंकको निक्षेप १ खर्ब ८० अर्ब २ करोड १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मेगा बैंकको १ खर्ब ४७ अर्ब ५९ करोड ९० लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
एनआईबिएल बैंकको कूल सम्पत्ति २ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड ३० लाख ९ हजार रुपैयाँ र मेगा बैंकको कूल सम्पत्ति २ खर्ब ७ अर्ब १४ करोड ९४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ गरी कूल सम्पत्ति ४ खर्ब ४४ अर्ब ८७ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
एनआईबिएल बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब ९० करोड ७५ लाख २९ हजार रुपैयाँ र मेगा बैंकको ३ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ गरी कूल ७ अर्ब ८६ करोड ५० लाख ९८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासमा एनआईबिएल बैंकको सञ्चालन नाफा ३ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मेगा बैंकको २ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मर्जरपश्चात बन्ने बैंकको सञ्चालन नाफा ६ अर्ब ६२ करोड ५१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासमा एनआईबिएल बैंकको खुद नाफा २ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मेगा बैंकको २ अर्ब १ करोड ४५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मर्जरपश्चात् बैंकको खुद नाफा ४ अर्ब ४९ करोड १७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासमा एनआईबिएल बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४५ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मेगा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ९६ करोड १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मर्जरपश्चात् बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ४१ करोड ४० लाख २१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस)
एनआईबिएल बैंकको ईपीएस १८.०४ रुपैयाँ रहेको छ भने मेगा बैंकको १६.६६ रुपैयाँ रहेको छ । मर्जरपश्चात बैंकको ईपीएस १८.२५ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
#mega investement merger